War Saxaafadeed- Maalinta caalamiga ah ee dimuqraadiyada 14 ka bisha Sagaalaad | Qaran News
War Saxaafadeed- Maalinta caalamiga ah ee dimuqraadiyada 14 ka bisha Sagaalaad
Writen by Qaran News | 5:52 pm 14th Sep, 2019
Sabti,14 ka September 2019
Maalinta caalamiga ah ee dimuqraadiyada 14 ka bisha Sagaalaad
Mogadishu, September 14, 2019; Shan abwaanno dhalinyaro ah ayaa loo aqoonsaday sannadkan abaalmarintooda ay ku guuleysteen soo gudbinta gabayga iyagoo qayb ka ah tartanka Midowga Yurub ee ay maalgalisay silsiladda Nabadda. Ku dhawaaqida ayaa lagu sameeyay xafladda abaalmarinta Silsiladda Nabadda oo lagu qabtay Muqdisho.
Waxaa ka soo qeybgalay wakiilo ka socda dowladda iyo Midowga Yurub iyo sidoo kale NGO-yo iyo bulshada caalamka. Kuwa helay abaalmarinnada iyo sidoo kale musharixiinta liiska ayaa soo bandhigay gabayadooda intii ay munaasabadu socotay.
Nicolas Berlanga Martinez, danjiraha midowga yurub ee soomaaliya ayaa yiri waxaa sharaf ii ah inaan u dabaaldego gabayaaga dhallinyarada ah. Midowga Yurub wuxuu ku faraxsan yahay inuu martigeliyo kaqeybgalayaasha maanta Muqdisho.Maalinta barito ee Maalinta Caalamiga ah ee Dimuqraadiyadda, waxaan xasuustaa in dimoqraadiyadu ay ku saabsan tahay dadka oo ay ugu muhiimsan tahay dhalinyarada.
Dimuqraadiyaddu waxay sidoo kale ku saabsan tahay kaqaybgalka taa soo aasaasi u ah nabadda, barwaaqada iyo ixtiraamka xuquuqda aadanaha. Tabarucayaasha gabayaaga dhallinyarada ahi waa sida gabal-yar oo sawir-qaade ah oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed, mid walbana cabbirkiisa kala duwan; laakiin dhammaantood waxay ka buuxaan rajooyin nabad iyo dib u dhis Soomaaliya.
Midowga Yurub wuxuu bilaabay tartankii gabayada Silsiladda Nabadda isagoo taageero ka helaya dhalinyarada Soomaaliyeed si dib loogu soo celiyo dhaqankii gabay ee silsilad ee soo jireenka ahaa. Ujeedada abaabulka dhalinyarada ayaa ahayd mid u furan dhamaan soomaalida daafaha aduunka ujeedkeeduna ahaa in la qabto wada hadalo bulshada dhex mara oo ku saabsan dhalinyarada soomaaliyeed fikradaha dimoqraadiyada iyo nabada. Tartanku wuxuu ka soo galay qaybo ka mid ah afarta gees ee adduunka oo dhan Melbourne, Bosaso, Stockholm, Hargeysa, New Delhi, Seattle, London, La, Baydhabo, Muqdisho iyo magaalooyin kale oo caalami ah iyo maxalli maxalli ah.
Si aad uga ogaato wax badan oo ku saabsan tartanka oo aad aqriso waxyaabaha ka soo gala tartamayaasha, fadlan la xiriir xiriiriyaha bogga websaydhka Silsiladda Nabadda: https://silsiladdanabadda.com